Danjire Macheal Keating oo ka hadlay Xiisada Tukaraq katagan – Radio Daljir
Janaayo 11, 2018 12:36 g 0
Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay arrimaha Soomaaliya Macheal Keating oo shalay booqasho ku tagay Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa la kulmay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Labada masuul ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo abuuri lahaa jawi hufan oo ay labada dhinac ku wada shaqeeyaan, sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka labada dhinac, Nabadgelyada, shaqo abuur in loo sameeyo dhalinyarada iyo arrimo kale.
Keating oo soo hadal qaaday xiisada Tukaraq ayaa ku baaqay in labada dhinac ee kala ah Puntland iyo Somaliland ay si deg deg ah u yeeshaan kulan wada hadal ah oo lagu dhameynayo xiisada ka taagan Gobolka Sool gaar ahaan degaanka Tukaraq.
Wuxuu sheegay Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay arrimaha Soomaaliya in uusan xal aheyn in la adeegsado awood Millitari, taasina aysan faa’ido ugu jirin maamulada labada dhinac iyo shacabkooda.
Dhanka kale Macheal Keating ayaa wax loola barbar dhigi karo caleemo qoyan saaray arrinta la xiriirta Maamulka Hawada oo Dowladda Soomaaliya sanadkii 2017 gaba gabadiisa ay la soo wareegtay, taasi oo ay dood ka keentay Somaliland, wuxuuna sheegay muhiim in ay tahay in labada dhinac ay ka wada arrinsadaan.
“Waxaan ku baaqeynaa kulan deg deg ah oo ay yeeshaan labada Maamul ee Puntland iyo Somaliland, oo lagu xalinayo xiisada ka taagan degaanka Tukaraq, taas bedelkeeda waxaan ka digeynaa arrintan in loo isticmaalo awood Millitari, sidoo kale waxaa muhiim in Soomaaliya iyo Somaliland ay ka wada hadlaan arrinta Maamulka Hawada.” Ayuu yiri Keating.
Labada Maamul ee Puntland iyo Somaliland ayaa hanjabaado kul kulul hawada isku mariyay, iyaga oo u muuqda in ay wadaan kicin bulsho, hadii aan ku hormarno Somaliland, waxaa u hadlay Wasiirka Amniga wuxuu sheegay xiisada Tukaraq in ay tahay daandaansi fara qaawan oo ay wado Puntland, hadalkaas waxaa jawaab ka bixiyay Madaxweyne Gaas, wuxuuna sheegay in Somaliland ay garabsiineyso Argagixisada, Puntland-na aysan masuul ka noqon doonin cawaaqib xumada ka dhalata xiisada Tukaraq.
RW Ku xigeenka Somaaliya oo Turkiga kaga qayb galaya Shir Caalami ah